ỌKA ỌMM!! The "Esịtidem Pilot Guide nke nkenke Pressure mbenata valvụ" ọkọlọtọ nke na-edu deziri site anyị ụlọ ọrụ a mma site Zhejiang Product Quality Association dị ka "Quality Criterion" maka zhejiang n'ichepụta iche iche 'guzo ...
Kedu otu valvụ Solenoid si arụ ọrụ?
Kedu ihe bụ solenoid? Solenoid bụ okwu ọnụọgụ maka eriri waya ejiri rụọ ọrụ dị ka electromagnet. Ọ na-ezo aka na ngwaọrụ ọ bụla na-agbanye ike eletrik na ike igwe site na iji solenoid. Ngwaọrụ a na - emepụta magnetik site na ọkụ eletrik wee jiri igwe magnet mepụta linea ...
2020, anyị gafere ọnụ
Oge na-efegharị, n'otu ntabi anya, ọkara afọ nke 2020 agafeela. Ulo oru na ndi oru n’uwa nile enwetela ule ohuru n’ime onwa isii gara aga n’ihi COVID-19. Na mbido afọ 2020, nsogbu ọrịa, nsogbu ụlọ ọrụ malitere ...